दीपक जडित, (एङकरेज, अलास्का)
के के भयो दुनियाँमा खै म त कुन् कुनामा छु ?
जगत् भुली जिन्दगीले लाउने जादू टुनामा छु ।
सुरक्षाका ब्यूहहरु आफैं रचेँ जिन्दगीमा ,
अभिमन्यु भई आफैं फसेँ र म थुनामा छु ।
कस्तो लोभ भकारीको डम्म भरिनु नै पर्ने ,
कठै ! अझै चुब्रुक्क म टपरी र दुनामा छु ।
फेदैबाट गिँडिएर ढलेपछि सिङ्गो रुख ,
म ठुटोमा पलाउँदै गरेका ति मुनामा छु ।
उठ् दीपक अब त यो जिन्दगीमा अलिमाथी ,
भन्छु तर सँधै यहि जिन्दगीकै गुनामा छु ।